Ungawunakekela kanjani umdlwane ongenamama | Izinja Umhlaba
Ungayinakekela kanjani injana engenamama
ULurdes Sarmiento | | Imidlwane
Imvamisa, inja engumama izonakekela izingane zayo ngothando nangobumnene, kepha kwesinye isikhathi izinto azihambi kahle futhi amazinyane ayizintandane. Uma lokho kwenzeka, umuntu obasindisayo kumele abanikeze konke ukunakekelwa abakudingayo kulesi sigaba esintekenteke.
Kuwumsebenzi onzima, kepha kuwufanele impela. Uma unentshisekelo yokwazi ukuthi ungawunakekela kanjani umdlwane ngaphandle kukamama, eMundo Perros sizokunikeza imininingwane oyidingayo.
1 Ungamama kanjani umdlwane kusuka ezinsukwini kuye ezinyangeni ezintathu?
1.1 Kubeke endaweni enethezekile futhi efudumele
1.2 Yondle njalo emahoreni ama-2-3
1.3 Zigcine uhlanzekile
1.4 Hlanza ibhodlela nezingono
1.5 Vikela kuma-parasites angaphakathi nangaphandle
2 Okufanele ukwenze lapho umdlwane unqatshwa ngumama
2.1 Ungayondla kanjani injana uma ingenaye umama?
2.1.1 Indlela yokwenza ubisi lwemidlwane?
2.2 Ungayihlanza kanjani imidlwane futhi usifundise kanjani ukuyenza?
3 Yiziphi izifo umdlwane ongazithola ngaphandle kukamama?
3.7 I-canine distemper
4 Yiziphi izizathu ezingenza ukuthi umdlwane unqatshwe?
Ungamama kanjani umdlwane kusuka ezinsukwini kuye ezinyangeni ezintathu?
Kubeke endaweni enethezekile futhi efudumele
Umbhede Wenja ye-Bedsure ...
Imidlwane esanda kuzalwa ayikwazi ukulawula ukushisa komzimba futhi ingaba ne-hypothermic cishe ngaphandle kokuqaphela thina. Ukukugwema, kubaluleke kakhulu ukuzigcina embhedeni noma embhedeni wezinja, kugcine egumbini lapho kungekho khona okusalungiswa.
Uma ngaleso sikhathi singenakho, singasebenzisa ibhokisi lepulasitiki esizofaka kulo izingubo zokulala. Ngaphezu kwalokho, futhi ikakhulukazi uma kuyindla-ebusika, kufanele ubeke ibhodlela elishisayo eduze kwabo ezisongwe ngendwangu ukuze zingashi.
Yondle njalo emahoreni ama-2-3
Ukuze zikhule kahle kufanele ubanikeze ubisi olushintshayo esizokuthola ukudayiswa emitholampilo yezilwane nasezitolo zezilwane ebhodleleni.
Akufanele ubanikeze ubisi lwenkomo ngoba lungabenza bazizwe kabi. Imvamisa kuzoba njalo ngamahora ama-2, kepha uma sibona ukuthi balala ngokuthula ebusuku, akufanele sibavuse.
Imidlwane kufanele ibekwe ibheke phansi, okungukuthi, zibeke emilenzeni. Ngale ndlela ngeke kube nengozi yokuncishwa umoya.
Ngemuva kokudla, hlanza imilomo yabo futhi khuthaza indawo ye-ano-genital ngendwangu noma ukotini oswakanyiswe ngamanzi afudumele, usebenzisa eyodwa entweni ngayinye (umlomo, umchamo kanye nendle).
Uma sibona ukuthi kunzima kubo ukuzikhulula, sizobalolonga okuyindilinga, ngokwewashi, esiswini imizuzu eyishumi ngemuva kokudla. Ngemuva kwalokho, siyabakhuthaza futhi.
Hlanza ibhodlela nezingono
Kubalulekile ukwenza lokhu ukuvikela ukutheleleka. Sebenzisa imikhiqizo yokubulala amagciwane eyenzelwe izinto zezingane noma kahle umshini wokuhlanza umusi. Enye indlela ukuletha ngamathumba ebhodweni lamanzi.
Vikela kuma-parasites angaphakathi nangaphandle
Lapho unamasonto amabili isikhathi esihle sokuthi ubanikeze isiraphu esusa noma yiziphi izimuncagazi zangaphakathi abangaba nazo. Uma useSpain, udokotela wezilwane uzoncoma ukubanikeza UTelmin Unidia izinsuku ezi-5, bese uphinda ukwelashwa ngemuva kwezinsuku eziyi-15.
para amazenze, imikhaza kanye nezinye izimuncagazi zangaphandle, kufanele ulinde aze aphenduke amasonto ayisithupha, ngaleso sikhathi kuzoba isikhathi sokuthola imigomo yabo yokuqala.
Okufanele ukwenze lapho umdlwane unqatshwa ngumama
Uma lokhu kwenzeka akufanele wethuke, futhi into engcono kakhulu ongayenza ukuya kuchwepheshe wezilwane, ukwenza ukubuyekeza okujwayelekile kwalesi simo, ukubukeza inja yethu ngokuningiliziwe. Lokhu akusho ukuthi kucacile ukuthi yamukela izinja, ngakho-ke ukukhula kwazo kungaxhomeka nakuwe.
Ungayondla kanjani injana uma ingenaye umama?
Kufanele udale indawo efanele ukuthi imidlwane ihlale esikhungweni esifana nalesi abasinikwa ngumama waso. Thola indawo efudumele noma efudumele.
Ngalesi sikhathi kuzobaluleka ukuthi bondle ngaleli lungiselelo elikhethekile njalo emahoreni amathathu, amahora angama-3 ngosuku, ngoba uyidinga ngokuphuthumayo, ngoba ubisi lukanina lubaluleke kakhulu kulezi zinsuku zokuqala.
Indlela yokwenza ubisi lwemidlwane?
Ezitolo nakodokotela bezilwane ungathola izimpushana ezincibilika emanzini ashisayo kanye nephakeji lapho ibhodlela elilungiselelwe ikakhulukazi isimo nalo lizofika. Kumele sibilise amanzi bese sinyakazisa kuphela inani elikhonjisiwe lale mpuphu kulowo manzi.
Ungayihlanza kanjani imidlwane futhi usifundise kanjani ukuyenza?
Ukuhlanza imidlwane esanda kuzalwa kufanele ugweme amanzi amaningi futhi kulesi sigaba sokuqala futhi insipho. Into enhle kakhulu kungaba ukususa ukungcola bese uyomisa futhi ngokushesha. Kwezinye izimo, kusetshenziswa izindwangu ezimanzi, ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lwemikhiqizo yamakhemikhali.
Ukukhuthazeka ukuze bakwazi ukuchama futhi bathole indle kubaluleke kakhulu. Abakwazi ukuzenzela bebodwa, ngakho-ke kufanele uhlikihle isisu sakho ukuze usizuze. Lokhu kufanele kwenziwe okungenani inqobo nje uma eseqedile ukudla.
Yiziphi izifo umdlwane ongazithola ngaphandle kukamama?
Ngokuvamile, lapho kukhulunywa ngezifo zezilwane, kuvame ukucatshangelwa kuphela lezo ezifuywayo ezibangelwa amagciwane, ezijwayelekile futhi ezijwayelekile, kepha kuyaziwa ukuthi njengamanje imidlwane ivame ukufinyelela odokotela bezilwane nezinye izinhlobo zezifo ezivame ukuthinta lezi zilwane kakhulu kusukela ekuzalweni kuya izinyanga zokuqala.
Yingakho Ngezansi sizokukhombisa zonke izinhlobo zezifo inja yakho engazithola Lapho ubhekene nengxenye yokuqala yempilo yakho:
Uma umdlwane wakho unesifo sohudo esihlala njalo njengesimpawuImpela inkinga yakho iphathelene nale protozoan ebizwa ngeGiardiasis. Lokhu kutholakala kwinani elandayo lamacala futhi ukutheleleka kwalo kungukufakwa kwama-cysts amandla amakhulu athathelanayo.
Ngokusho kochwepheshe, ukutheleleka kuyashesha kakhulu futhi kuyaziwa ukuthi cishe amaphesenti ama-50 emidlwane ivame ukuba nayo, kuphela kokuthi kwezinye izimo azivezi noma yiluphi uhlobo lwezimpawu, kanti kwezinye, kunokungaphatheki kahle okuhambisana nohudo.
Inkinga uqobo iqukethe ukumuncwa kokudla okungalungile ngohlelo lokugaya ukudla, okuthile okuthi uma kwenzeka ngokungapheli kungaholela ebuthakathakeni obukhulu benja.
Futhi kubizwa i-demodectic mange, lawa ngama-parasites adala ukuvuvukala futhi lokhu kubangelwa ukwanda okungalingani kwamangolwane. Lokhu kungaletha ukuphazamiseka komdlwane, njengezinhlobo ezahlukahlukene zezifo ezithathelwanayo ze-bacteriological nature kanye ne-furunculosis.
I-mite egcina igcwele ngokweqile ijazi lenja yi-demodex canis, evame ukutholakala njalo kuyo yonke imidlwane, kepha kubantu abancane abangayithinti.
Ngaphambi kokuthi sisho esinye sezizathu zokuthi kungani inja yakho ingakhombisa izimpawu zohudo, kepha kukhona nesinye, esikhombisa amacala amaningi emhlabeni wezilwane. Endabeni yecoccidiosis, uhudo luyoba namanzi amaningi futhi lungaba namachaphazelo egazi, ngezikhathi ezithile noma kaningi.
Kukhona uhlobo oluthile lwalokhu oluyingozi kakhulu futhi oluyingozi, okuyilona olubangelwa yi-agent yeCrystosporidium, evame ukuhlasela i-mucosa yamathumbu edala umonakalo omkhulu. Lokhu kungaholela umdlwane ezinkingeni zesisu lapho kuzoba lula ukuqala inqubo yokuvuselela amanzi.
Lezi zinambuzane ziyizitha ezinkulu zomzimba wezilwane zethu ezincane. Okuhlaba umxhwele kakhulu kulezi yizilinganiso zayo, ezingafinyelela cishe ngamasentimitha ayi-10 ubude, into engalingani ngokuphelele emzimbeni wemidlwane.
Lapho isithombe se-ascariasis sivela kumdlwane wethu, lokhu kubangelwa i-toxacara leonina noma i-toxacara canis, futhi ubukhona bayo emalini eyeqile kungaholela ezingeni eliphezulu lokungakwazi ukucubungula ukudla ngohlelo lokugaya ukudla.
Ukudluliswa kwala ma-toxacaras kungaba ngezindlela eziningi, kuze kube seqophelweni lokuthi umdlwane ubungawathola ngophakathi, ngunina ngisho nasenqubeni yokuncelisa.
Emidlwane enenyanga eyodwa ubudala, lokhu kungadala ubuhlungu obukhulu besisu, futhi ngesikhathi sokukhula kungenzeka izinja zizibambe emaqandeni asakazeke emapaki.
Njengoba igama layo liphakamisa, kukhona imbuzane ebizwa ngeCheyletiella futhi lokhu kunosayizi omkhulu njengesici, yingakho kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi "inkwethu yokuhamba".
Isifo esingadluliswa ngisho yithi uqobo, ngoba ikhombisa izici ezithathelanayo nakubantu futhi amacala amaningi aziwa lapho amagciwane atholakala khona okokuqala kubanikazi bawo.
Esinye sezifo ezibangelwa amagciwane esaziwa kakhulu emhlabeni wezilwane ezifuywayo, ngoba sasingesinye sezinselele kakhulu kodokotela bezilwane isikhathi eside.
Lokhu kushintshile ngokuhamba kwesikhathi futhi namuhla awekho amacala amaningi kakhulu we- umabhebhana njengakuqala kwezinye izikhathi. Lesi yisifo namuhla esinezigameko eziphakeme kulezo zinhlobo zezinja ezingagonyiwe.
Leli gciwane lalinokuziphendukela kwemvelo okungathandeki kakhulu kwezilwane, kwaze kwafika ezingeni lokuthi kunezinhlobo ezahlukahlukene zamasampuli egciwane emidlwane ehlukene, umkhiqizo wokuguqula ukuze usinde.
Esinye sezifo ezinzima kakhulu, kwesinye isikhathi esingabulala, yilesi i-canine distemper. Lokhu kungenxa yenani elikhulu lezingxenye zomzimba wenja elingahlasela. Kuyisifo esinezinga eliphakeme lokutheleleka, futhi ingaletha izinkinga zesisu, zokuphefumula, ze-ocular neze-urogenital phakathi kwezinye eziningi.
Leli gciwane lizongena emzimbeni womdlwane emoyeni, lize lifinyelele nakuma-lymph node, lapho lizokhiqiza khona ukuze lisabalale ohlelweni lokuphefumula. Izifo zesibili zebhaktheriya ziyimbangela eyinhloko yalokhu.
Yiziphi izizathu ezingenza ukuthi umdlwane unqatshwe?
Kunezizathu eziningi zokuthi injana eyodwa noma ngaphezulu inganqatshwa futhi phakathi kwazo kungenzeka lokho umama usemncane kakhulu futhi kusesekuseni kakhulu, ngoba abatholi ukukhiqiza inani elidingekayo lobisi; onenkinga yezempilo elethwe ukubeletha; izinkinga zokuzijabulisa nokucindezeleka.
Siyethemba kube wusizo kuwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Imidlwane » Ungayinakekela kanjani injana engenamama
U-ELISA ZERPA kusho
Nginomdlwane onezinsuku ezingama-27, umama wamshiya futhi abaludayisi lolo bisi lapha, kukhona ubisi lwenkomo kuphela, njengoba ngilunisela, ngilubona lubuthaka
Phendula ku-ELISA ZERPA
U-Ana Paton kusho
Nginenja yenyanga eyi-1 nezinsuku eziyi-12 ... ebusuku kuyinto yokudonsa ekhalayo nginombhede nezilwane ezifakiwe. Futhi endabeni yokudla, ubisi alufuni ukuthi afune kuphela isifuba esincanyana esisikiwe kanye ne-pate yemidlwane, ngabe lokho kungaba kuhle ngenja encane kangaka? Namanzi .. ngiwunikela kangaki ngosuku
Phendula u-Ana Paton
Amakhambi asekhaya okutheleleka ngomchamo ezinjeni
Umuzwa ongavamile wokuzwa ezinjeni